Kuyizinsuku lapho abantwana bephathwa khona ngamaswidi. Namuhla hhayi omama kuphela, kodwa ngisho nogogo bajwayele ulwazi mayelana nokudla okunempilo kwezingane. Kungasho ngokuphepha ukuthi ugogo wanamuhla uzofika kumzukulu wakhe hhayi ngekhukhi, njengoba kwakuneminyaka engaba ngu-10 edlule. Futhi ngama-apricot omisiwe, umlimi omuncu kanye neminye imikhiqizo ewusizo. Kulesi sihloko ngokuningiliziwe ngitshele mayelana nokudla okunempilo kwezingane kusukela ngonyaka ongu-1.
Ngingadla amantongomane nezithelo ezomisiwe
Yiqiniso, izithelo ezomile ziyasiza futhi ziyingxenye yokudla okunempilo. Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi izingane ezineminyaka engu-1 kuya kweyesi-1.5 ubudala azikakulungi ukudlala kahle. Ngakho-ke, noma yisiphi isithelo esomile sidinga ukwelashwa okukhethekile. Izithelo ezomile (ama-apricot omisiwe, umlimi omuncu, omisiwe), balungiselela ama-decoctions nama-compotes, kanti izithelo eziphekiwe zichotshoziwe. Mayelana nezinhlayiya ezinomile, ezinomshini, izinzuzo zabo zingabaza. Ngaphezu kwalokho, ziqukethe isamba esikhulu ushukela.
Izingane ezineminyaka engama-3 zingangeza amantongomane efomini eliyimpuphu ukuze zilungele ukudla. Kodwa ngesilinganiso esincane kakhulu kakhulu. Qiniseka ukugcina ingane. Uma ungaqapheli noma yiziphi izimpawu zokuphendula okwenziwe, uqhubeke ufake amantongomane ekudleni komntwana. Kodwa kuyadingeka emithini encane futhi hhayi njalo kaningi. Umzimba wengane awunawo ama-enzyme okwanele wokugaya lo mkhiqizo.
Ngakanani uketshezi oludingekayo kubantwana abaneminyaka engu-1 ubudala
Izingane ngonyaka wokuqala wokuphila ngokudla kwemvelo yamanzi ziphethwe hhayi ngaphambi kwezinyanga ezingu 3-4 emva kokudla. Qala nge-1 / 3-1 / 2 isipuni. Bese ukwandisa nsuku zonke ngo-5 ml, kancane kancane ukhule ku-30 ​​ml. Inani lejusi lithathwa yi-formula: izikhathi ezingu-10 inani lezinyanga zokuphila kwengane. Uma inani elilodwa lejusi lingaphezu kuka-50 ml, kufanele lihlukaniswe ngama-2 amanani.
Izingane ezineminyaka engama-1 kuya eminyakeni engu-3 ubudala zanele 50 ml of ijusi. Ekuqaleni kunconywa ukuba unikeze ijusi le-apula elicacisiwe. Bese ufaka ikhasi, iplamu. Kamuva - i-currant emnyama ne-cherry. Ama-citrus, kanye nokusajingijolo, isitibhilikhi nama-juice ezivela ezenzweni ezingavamile zinikezwa izingane ezingekho ngaphambi kuka-6-7m. Kumele kukhunjulwe ukuthi i-apricot ne-plum, i-carrot juices inomphumela wokuphumula. Futhi ukulungisa - cherry, igromegranate, black currant kanye namajikijoloji.
Kungenzeka yini ukunikeza izingane anyanisi negalikhi
Ngokweziphakamiso zokudla okunempilo, ukudla okunemvelo, anyanisi oqoshiwe kanye negalikhi kunezelwa ekudleni kwezingane kusuka ezinyangeni ezingu-8 zokuphila. Emva konyaka owodwa, qala ukwengeza anyanisi oluhlaza. Ama-anyanisi ahlanzekile kanye nezingane zikagalikhi, njengomthetho, abazidli ngokwabo ngenxa yephunga elithile. Akudingekile ukuba ucindezeleke, ngoba ingane ingaba nesisu esiswini sokudla okunjalo.
Ngingadla izingane zami ngokushesha ngemva kokulala
Awukwazi ukondla izingane ngokushesha ngemuva kokulala. Ukuhlala isikhathi eside embhedeni ofudumele kunciphisa ukuvinjelwa kwamajusi wokugaya. Kuyinto engathandeki ukondla izingane futhi ngaphambi nje kokulala. Ngenxa yokuphindaphinda, ukufisa ukudla, kungenzeka ukuba ungene endleleni yokuphefumula. Lokhu kuyingozi kakhulu! Futhi, ungadli izingane ngaphambi kokugeza.
Kungenzeka yini ukunikeza abantwana kusukela ngonyaka ongu-1 ama-infusions ebisi, ilayisi, amakhowe amathiwe
Namuhla, omama abaningi kakhulu bahlanganyela imvubelo yokulungiselela itiye, ubisi, ilayisi kvass. Abazali abaningi nengane bayayiphatha, bekholelwa ukuthi kuyasiza kakhulu. Phakathi naleso sikhathi, i-kvass, ubisi lwamakhowe amakhowe emanzini okupheka ekhaya aluhlaza kungcono ukungasebenzisi. Futhi hhayi kuphela ngenxa yokulimala kwamanzi aluhlaza, kodwa futhi ngenxa ye-asidi eyanda ebuntwaneni.
Zikhona yini izigaba ezingxenyeni zezingane
Isisindo somzimba esiphuthumayo siphumela ngenxa yesimiso sokunqoba kwengane ngokudla okugcwele ngamafutha kanye nama-carbohydrate. Landela izincomo zokudla okufanele. Izigaba kufanele zanele, kodwa zingadluli amandla okuphila kanye nezidingo zomzimba wengane. Ngakho-ke, umthamo wansuku zonke wezingane kusukela ku-1 ukuya ku-1.5 unyaka ka-1200 g. Ngama-200-250 g ngesidlo esisodwa ngokudla okuyisikhathi esiyisihlanu. Uma uneminyaka engama-3 ubudala ngosuku, kudingeke ukuba 1.5 kg yokudla. Inombolo yokuphakelayo - izikhathi ezingu-4. Okuqukethwe kwe-caloric kokudla kuhanjiswa ngalendlela elandelayo: ibhulakufesi - 25%, isidlo sasemini - 30%, isidlo sasemini - 15-20%, isidlo sakusihlwa - 30%.
Kukhona izingane ezizijabulisa ngokwabo ezidla kakhulu ku-400-500gr ngehora ngalinye. Abazali banesithakazelo sokuthi bangenele yini? Uma isisindo nokuphakama kwengane kuhlangene kahle, akufanelekile ukungenelela. Uma ingane ikala okungaphezu kwalokho okudingekile, khona-ke kanye nodokotela kungenzeka ukuthi ulungise ukudla komntwana. Kukhona izingane, okuphambene nalokho, azifuni ukudla. Uma ingane idla kancane futhi ingabi nesisindo, khona-ke ayikho inkinga. Kodwa uma abazali bebona ukulahlekelwa isisindo kwengane, kufanele ubone udokotela. Ukudla akunakukwazi ukungenwa kahle, ngokungabi namsoco, nezinkinga nge-gland yegciwane. Isizathu sinqunywa udokotela futhi, ngenxa yesifo sokuxilongwa, sichaza ukwelashwa. Ngaphandle kwedokotela, kuyingozi ukuthatha noma yiziphi izinyathelo.
Qinisekisa ukuqapha inani leshukela nosawoti odliwe. Ingcosana ingane idla usawoti noshukela, kungcono. Uma umama engabonakali umntwana kubo, khona-ke lokhu kudla kuyothathwa njengokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ushukela ofihliwe ukwanele kwimifino nezithelo.
Ngaki kaningi umntwana onyakeni ongu-1 angalungisa ama-salad kusuka ku-beet ne-izaqathe
Kulesi simo, le ndlela isuke iyodwa. Uma ingane ijwayele ukuqotshwa, khona-ke ungayidla ngemikhiqizo enjalo nsuku zonke. Uma ingane ivame ukubhekana nesitokisi esivulekile, khona-ke izikhathi ezingu-1-2 ngesonto zanele. Ungakwazi ukuhlanganisa i-laxatives ne-beet ne-izaqathe ngokufaka irayisi. AmaSaladi ezinganeni angagcwaliswa ngamafutha omquba namafutha omnqumo, ijusi kalamula, i-apula egayiwe, i-yogurt. Iphelele kuma saladi we-saladi yogurt. Ukukhetha kuzokwenza umntwana wakho ngokwakhe.
Izingane kufanele zinikezwe isinkwa, kodwa bezdozhzhevoy. Uma ingane yakho yenqaba ukudla isinkwa, ungadangali. Izingane zivame ukuguqula izintandokazi zazo. Kungenzeka ukuthi emva kwesikhathi uzokujabulela ukuyidla. Landela izincomo zokudla okunempilo kwezingane kusuka ku-1 ubudala ubudala, futhi ingane yakho izokhula ibe nephilile.
Indima yokudla enkulisa
Ungondla kanjani ingane ukuze ikhule kangcono?
Ukudla kwezingane ngenxa yezifo
Ukunciphisa ubisi kubisi lwezinkomo ezinganeni
Izingane ziyakunakekelwa futhi zihamba phambili
Yini isimo sezulu esilindeleke eMoscow ngo-Agasti 2016. Isibikezelo sezulu esiteshini se-hydrometeorological eMoscow nasesifunda ngo-Agasti
Izinwele ezingenangwenya endaweni yangasese
Izithelo jelly ezine-red currant
Umlando wesitayela nesitayela ekugqoka
Kubani abazovota okhethweni luka-2016 eRussia ngaphandle kwe-United Kingdom. Amagama abakhethiweyo ku-State Duma aseMoscow naseSt. Petersburg
Sebenza kwi-Intanethi ekhaya: ukuthayipha
Yimaphi amadoda abesifazane abathanda ukunikeza izipho?
Shintsha izinyanga ezingu-9
Izindawo zokuhlala e-Seychelles
Ku-blog u-Anfisa Chekhova ukhuluma ngokukhululekile ngokulahlekelwa kwesisindo sakhe esibucayi
Indima yabesifazane emndenini wanamuhla
Indlela yokwenza ukudla komuntu?